မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ တင်သွင်း၊ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင်?? - Yangon Media Group
လက်ရှိအနေအထားအရ ပြည်တွင်း၌ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး ထပ်မံမြင့်တက်နိုင်ဖွယ်ရှိမရှိကို မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့် နှင့် အခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။
ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာခြင်းက ဘာကြောင့်လို့ အန်ကယ်အနေနဲ့ ထင်ပါသလဲ။
အဓိက,ကတော့ စက်သုံးဆီဆိုတာ အန် ကယ်တို့နိုင်ငံကလည်း ထွက်တယ်။ အကြမ်း ဖျင်းပြောရရင် ခန့်မှန်းခြေ ငါးရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျန် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူပြီး သုံးစွဲနေရတာပါ။အဲဒီတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ စက်သုံးဆီ ဈေးဟာ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုပဲ တည်မှီ နေတယ်။ နောက်ဝယ်တော့ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ် ရပြီး ရောင်းတဲ့အခါမှာ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ရောင်း ရတဲ့အခါကျတော့ ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းရဲ့အ ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ကျန်တာက တော့ နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ အခွန်နှုန်းထားနဲ့ အခွန်ကောက်ခံတဲ့ စနစ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါ တယ်။
လတ်တလော စက်သုံးဆီဈေး တက်ရတဲ့ အနေအထားက အဓိကကျတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာလဲနှုန်းက နည်းနည်းတော့ တက်တယ်။ တစ်ဒေါ်လာကို ၁ဝ လောက် တော့တက်တယ်။ အဲဒီတစ်ဒေါ်လာ ၁ဝ က ဒီဘက်မှာက တစ်လီတာကို တစ်ကျပ်လောက် ပဲ တက်တဲ့အတွက် သက်ရောက်မှုသိပ်မရှိဘူး။ နောက် အခွန်နှုန်းထားကတော့ တစ်နှစ်တစ် ကြိမ် လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းတာကလည်း ဒီ နှစ်မှာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။ တစ်ဖက်က တော့ အခွန်ကောက်ခံတဲ့စနစ်မှာ ကျင့်သုံးတဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အပေါ် တည်မှီတယ်။ အဲဒီစနစ်တွေကတော့ အရင်ထက်စာရင် ပိုကောင်းလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ စက်သုံးဆီလုပ် ငန်းရှင် တော်တော်များများကတော့ LTO လို့ ခေါ်တဲ့ အခွန်ထမ်းကြီးစာရင်းထဲမှာ ပါဝင် တယ်။ ပါဝင်တဲ့အတွက် ပေးထားခဲ့ရတဲ့အခွန် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတွေကို အမှန်တကယ် တွက် ချက်ပြီးတော့ ပြန်အမ်းပေးတယ်။ တကယ်က နှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆို လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံ တော်ကို ပေးခဲ့တဲ့ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်ပေါင်း ပြီးတော့ လေးရာခိုင်နှုန်း အမြတ်ယူခဲ့တယ်။ဟိုအရင်တုန်းကဆို နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ပြန်မရဘူး။ ပြန်မရတဲ့အပြင်ကို ထပ်ပေးရတယ်။ ခန့်မှန်း စည်းကြပ်လို့ ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒါကတော့ စနစ် အားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် OAS လို့ ခေါ်တဲ့ Office Assistant System နဲ့ သွားတဲ့အခါ မှာ အခွန်က နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ကြိုတင်အခွန်အ ပြင် ထပ်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ စက်သုံးဆီ ဈေးတွေကို မလျှော့နိုင်ဘူး။ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက လည်း ပေးထားပြီးပြီ။ နောက်ထပ်လည်း ထပ် ပေးရတဲ့ အခါကျတော့ အန်ကယ်တို့အမြတ် တင်ထားတဲ့ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထဲကနေပြီးတော့ အခွန်ပေးပြီးရင် အန်ကယ်တို့အတွက် ထိုက် သင့်သလောက် ကျန်ပေမယ့် စားသုံးသူမှာ ဈေးများနေခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီး LTO စနစ် ပေါ်လာပြီး တကယ်ပြန်အမ်းပေးတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ယုံကြည်လာတယ်။ အမှန်အတိုင်း အခွန်စည်းကြပ်မှုတော့ ရမှာပဲ ဆိုပြီးတော့ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ထည့်မပေါင်း ကြတော့ဘဲနဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမြတ်ပဲ ထည့်ပေါင်းရောင်းတယ်။ အခွန် စနစ် ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် သတ်မှတ် တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ပိုကောင်းလာတယ်။ ပြော ချင်တာက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွန်စနစ်တွေ ကျင့်သုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် စားသုံးသူတွေ တွက်ချက်ပြီး ရောင်းချတာ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ဈေးနှုန်း ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီအပြင် အခွန်စနစ်ကို ဒီထက်ပိုမိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် သက်ဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍များသာ အန်ကယ်တို့က နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတွေ ဆောင် ပေးထားရတယ်။ အန်ကယ်တို့ မြတ်တာက လည်း နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကို ရောက်တဲ့အတွက် တချို့က တောင်းဆိုတယ်။ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို မဆောင်ပါရစေနဲ့တော့၊ နှစ်ကုန်မှပဲ ဒါတွေ ဆောင်ပါရစေ။ အမှန်အတိုင်း ဆောင်ပါ့မယ် ဆိုပြီး ပြောတယ်။
အန်ကယ်က မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက တော့ နှစ်ကုန်အထိ အဖြေကြီးကို မစောင့်ပါ ရစေနဲ့။ သုံးလတစ်ကြိမ် OAS စနစ်လေးနဲ့ အခွန်ကိုစည်းကြပ်တဲ့စနစ်လေးနဲ့ Refer များ ပြန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အခုထက်ပိုမိုပြီး ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့နဲ့ စက်သုံးဆီဈေးကို ထည့်မတွက်ဘဲ ရောင်း ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအခွန်ကို ရှောင်တဲ့ သူလည်း ရှောင်လို့မရအောင်လို့ မှန်မှန်ကန် ကန် ဆောင်တဲ့သူလည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ် အောင်လို့ပါ။ ကျင့်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အခွန် ထမ်းတွေမှာလည်း တရားမျှတတဲ့ အခွန်စည်း ကြပ်မှု ဖြစ်မယ်။ တစ်ဖက်က စားသုံးသူတွေ အတွက်လည်း ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ သက်သာ တဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ကို ဦးတည်မယ်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရေနံစိမ်းဈေးကြီးမြင့်တာနဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက် ကို ဘာကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရိုက်ခတ်စေတာလဲ။
အဲဒါကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကို ဘယ်လို ဈေးနှုန်းသွားသင့်သလဲဆိုတဲ့ Philosophy ကို သွားရပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတစ်ခုက တည်ငြိမ်နေသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Lower Price မှာ ရှိနေသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Market Price စသဖြင့် အဲဒီ Turn လေးတွေ ရှိ ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ ပြောရရင် ထိန်းကျောင်းထားတဲ့စနစ်ရှိ ခဲ့တယ်။ ဒီစနစ်မှာ နိုင်ငံခြားက ဈေးတက် လည်း မတက်ဘူး။ ဈေးကျလည်း မကျဘူး။ တစ်ချိန်က နိုင်ငံရဲ့ သွားခဲ့တဲ့စနစ်ပါ။
နောက်တစ်ခုက သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ စက်သုံးဆီကို နိုင်ငံတော်က နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးမူဝါဒမှားသွား ရင် ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၆ နှစ်တာကာလမှာ နိုင်ငံရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ထိုးနှက်သွားတဲ့တရားခံက စက် သုံးဆီပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ကထွက်တဲ့ စက်သုံးဆီရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားက လည်း သွင်းရတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မလောက်ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ စက်သုံးဆီကို စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ရက်ကို နိုင်ငံတော်က ဆယ်သိန်းလောက် ဖြန့်ပေးရတယ်။
နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ ၂ဝဝဝလောက် တန်တဲ့အချိန်မှာ ၂ဝဝ လောက်နဲ့ ရောင်းပေး တယ်။ ဆီတစ်ဂါလန်ကို တစ်ထောင်ကျော် လောက် ဆုံးရှုံးတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို မြန် မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်းကျော်လောက် နိုင်ငံ တော်ဘတ်ဂျက်က ဆုံးရှုံးတာ တစ်နှစ်၊ တစ် နှစ်ကိုဆို ဘီလီယံပေါင်းငါးရာလောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဒါက ဘယ်သူတွေက ရသလဲဆို တော့ ဈေးနှုန်းကို သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ရောင်းပေးတဲ့အတွက် ပြည်သူက ရှိတာ သန်း ၄ဝ၊ မော်တော်ကားနဲ့ ဆီထုတ်ခွင့်ရရှိတဲ့သူက သုံးသိန်းမရှိဘူး။ အဲဒီသူတွေကရော ပြည်သူ သန်း ၄ဝ ကို ကိုယ်စားပြုလားဆိုတော့ မပြု ဘူး။
အဲဒီသူတွေက သန်း ၄ဝ ထဲမှာမှ ချမ်း သာတဲ့သူတွေကို ပြည်သူသန်း ၄ဝ က ပိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ စိုက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကလည်းဝယ်၊ ပြည်တွင်းက ထွက်တာကိုလည်း စုပြီးတော့မှ ရောင်းပေးပေမယ့် ကားပိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေက ရောင်းစားတယ်။ တိုင်းပြည်က အရင်တုန်းက ဘတ်ဂျက် ဆုတ်ယုတ်ခဲ့ရတဲ့ အနေအထား၊ ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့အနေအထားက အဓိက,က စက် သုံးဆီကဏ္ဍ ပါပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စက်သုံးဆီဈေး တက်ချင်တက်ပါစေ ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီဈေး မတက်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ တချို့လူကြီးတွေ ပါပါ တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချမှတ်တဲ့ မူအတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်ရမှာပါ။ နိုင်ငံတကာကဈေးနဲ့ ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကို နိုင်ငံ တကာဈေးထက် လျှော့ရောင်းဖို့ကျတော့ ရိုးရိုးတန်းတန်းလူကတော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဘယ်လောက်အထိ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလဲ။
ဒီနေ့ စက်သုံးဆီအနေအထားကိုပြောရရင် စက်သုံးဆီရဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်က နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလည်း စက်သုံးဆီ မူရင်းပိုင်ရှင်သည် ထုတ် လုပ်တဲ့(အိုပက်)နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အမေရိကန်၊ ရုရှား ရှိတယ်။ သူတို့တွေက ဒီရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။ ဒီအင်အားကြီးအုပ်စုများ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ သူတို့ပဲ သိမှာပါ။ အမေရိကန်သမ္မတတို့၊ ရှရှားသမ္မတတို့ ဒီနေ့ စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်ရင် ရေနံဈေး တက်မယ်၊ ကျမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ရှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီ အရောင်းအဝယ်အခြေအနေက ကောင်းလာသလား၊ ဆိုးလာသလားဆိုတာ သုံးသပ်ပေးပါဦး။
အများကြီး ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ပြည်ပကနေ စက်သုံးဆီတင်သွင်းတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ အရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်ရင် စတင်သွင်းလာတုန်းကဆို လေထုကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ ဆာဖာ ပါဝင်မှုက ၅ဝဝဝ ပါတယ်။ အခု ဆာဖာ ၅ဝဝ ပဲ ပါတော့တဲ့အတွက် အရင်ထက် ဆယ်ဆ သက်သာလာတယ်။ ကွာခြားတာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့စနစ်တုန်းက ဆီနှစ်မျိုးရဲ့ ကွာခြားချက်က တစ်လီတာကို တစ်ရာလောက်ကွာတယ်။ အခု တစ်လီတာကို ၄ဝလောက်ပဲ ကွာတော့တယ်။ အရည်အသွေးပိုင်းမှာ အများကြီး တိုးတက်သွားတယ်။ အရင်က တန်ချိန် ၅ဝဝဝ ပဲ တင် သွင်းနိုင်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ သင်္ဘောခက ရေနံတစ်စည်ကို လေးဒေါ်လာပေးရတယ်။ ဒီနေ့ အချိန်မှာ တန်ချိန် ၂၅ဝဝဝ ကို သွင်းတဲ့အခါမှာ ပေးရတဲ့သင်္ဘောခက တစ်ကျပ်နဲ့ ပြားငါးဆယ် ပဲ ရှိတော့တယ်။ နှစ်ကျပ်နီးပါးလောက် သက်သာသွားတဲ့အတွက် နိုင်ငံ့ထွက်ငွေတွေ သက်သာ သွားတယ်။ စားသုံးသူတွေကျတော့လည်း သက်သာလာတဲ့ဈေးနှုန်းကို အပြိုင်အဆိုင် လျှော့ ရောင်းရတော့ စားသုံးသူတွေလည်း သက်သာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စက် သုံးဆီဈေးနှုန်းက အာဆီယံ(၁ဝ)နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒုတိယအနည်းဆုံးအဖြစ်နဲ့ ရပ် တည်နေပါတယ်။ မလေးရှားတစ်နိုင်ငံပဲ ကျွန်တော်တို့ထက်နည်းတာ ရှိတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမြတ်ရာခိုင်နှုန်း လျော့လို့မဟုတ်ဘူး။ သူက အထူးကုန်စည်ခွန် မကောက်တဲ့အတွက် သက်သာတာပါ။ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေထက်စာရင် ကျွန်တော်တို့က ပိုသက် သာပါတယ်။ ရောင်းချတဲ့ကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်း ပုဂ္ဂလိကကို စလွှဲပေးစဉ်က ဆိုင်ပေါင်းနှစ်ရာ ကနေ အခု ဆိုင်ပေါင်း နှစ်ထောင်ရှိပါပြီ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၂၄နာရီ ဆီအမျိုးအစား အကောင်း စား ၉၂၊ ၉၅ ပရီမီယံဒီဇယ် စသဖြင့် ဝယ်နိုင်ပါပြီ။ အဲဒီလောက်အထိ တိုးတက်ပြီးတော့ ပြောင်း လဲလာပါပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မျိုးမြန်မာပြည်ရွာ ၊ တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ သေရင်လည်းမကြောက်ပါ ၊ ရင်မြေကတုတ်ပါ
ကန်သမ္မတ ထရန့်က မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ကြန့်ကြာဖွယ် ရှိဟုဆို
ကမ္ဘာ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နေ့ အကြို ပလတ်စတစ် ကင်းစင်ရေး လှုပ်ရှားမှု မန္တလေးမြို့ ဦးပိန်တံတားနှ??
ခရီးသွားများစီးသော လှေ မီးစွဲလောင်၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ